Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » UDkt Jaymz New Hit Single Battles Inkinga Yempilo Yengqondo
UDkt Jaymz, umculi waseBrithani osehlala e-USA, usanda kukhipha ingoma yakhe entsha. Njengoba isithunywa sevangeli sokuqala emhlabeni siphenduka umculi we-EDM, ukukhululwa kwakhe okusha okuvuselelayo - "Uthando Lwakho," kubhekana nokukhula kokucindezeleka nesizungu.
Umqedazwe weCoronavirus emhlabeni wonke udale imiphumela elimazayo empilweni yabantu ngokwengqondo nangokomzwelo emhlabeni wonke. Ukukhiya, ukuhlukaniswa nokungaqiniseki kube nomthelela ekwenyukeni okushaqisayo kokukhathazeka, ukudangala kanye nokuzilimaza kubantu abasha. Ngokombiko wakamuva kakhulu we-CDC, ama-25% esampula yomhlaba wonke yabantu abasha abike ukuthi anenkinga yokusimama kwengqondo. Kusobala ukuthi abantu badinga umuzwa wethemba nothando ukuze balwe nale mizwa. UDkt Jaymz ukwenza lokho ngokuhlanganisa umculo nomyalezo owakhayo olwisana nemizwa yokuphelelwa ithemba.
Ukukhishwa kwakhe okusha kuhlanganisa i-retro disco nomdanso we-electronic ukujoyina imvuselelo yamanje ye-disco eyenziwe yaduma ngabaculi abafana noDua Lipa, u-Lady Gaga no-Doja Cat. Isiginci sesitayela se-chic sengoma, i-funky synth kanye nesisekelo esishisayo sidala umgudu onyakazisa abalaleli ezinyaweni zabo. Ngaphezu kwalokho, amagama ayo athambekele evangelini, enikeza abalaleli amavayibhu amahle nezindaba ezinhle ngesikhathi esisodwa.
Abantu abalwa nemizwa eqeda amandla yesizungu bangase babe nomuzwa wokuthi abanamuntu obakhathalelayo noma okuqondayo ukudabuka kwabo. Nokho, ngengoma yakhe ejabulisayo, uDkt Jaymz uhlaba izinhliziyo zabalaleli ngamazwi enhloso, uthando nokunakekela, ebonisa abantu ukuthi ababodwa. Uyahlabelela, “Uthando lwakho lubanzi kunolwandle. Umusa wakho ujulile kunolwandle.” Izosha zakhe zitshela izilaleli ukuthi uNkulunkulu uyabathanda futhi ufuna ukubanika induduzo nokuthula. Uyanezela, “Lapho ngizwa ukuthi ithemba seliphelile, ngakuthola. Unginike injabulo.” Wonke umuntu ufuna injabulo, futhi le ngoma iqokomisa injabulo yaphakade etholakala ebuhlotsheni noNkulunkulu.
Akukhona nje kuphela ukuthi "Uthando Lwakho" olulingana kahle negagasi le-pop disco lamanje, kodwa ividiyo yayo ifana ne-vibe. Ividiyo yomculo isiza kakhulu ngengqikithi yokuhlangana - into esilahlekele kulo bhubhane lomhlaba wonke - inika izethameli zakho ukumelwa okubonakalayo kwabantu abahlangana ndawonye ukuze bathole injabulo.